बिबाह पछि स्वेता खड्का को पहिलो अन्तरबार्ता// भन्छिन सासु र जेठानी साथि जस्तै - Bihani Nepal
बिबाह पछि स्वेता खड्का को पहिलो अन्तरबार्ता// भन्छिन सासु र जेठानी साथि जस्तै
नायिका स्वेता खड्का सोमबार बैबाहिक बन्धन मा बाधिएकी छिन् . आफ्नो बिहे को पुर्ब सन्ध्या मा वहाले आफ्नो फेस बुक मार्फत एउटा ठुलो status लेखेर आफुले अब आफ्नो पछिलो जिन्दगीलाई भुलेर नया खुसि रोजेकी खुलासा गरिन ।
उनले धनगढीका विजयेन्द्रसिंह रावतसँग विवाह गरे। उनले भनिन् कि उहाँ आफ्नो परिवारका सदस्यहरु, साथीहरु र एल्डरहरु को निरन्तर प्रयास र शुभचिन्तकहरु द्वारा दिएका प्रोत्साहन संग यो निर्णय लिन सक्षम छ। उनले यद्यपि उनको बारेमा सामाजिक धारणाको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठाईन्। “मेरो दिमागमा एउटा प्रश्न छ: के यो पितृसत्तात्मक समाजले मेरो निर्णयलाई स्वीकार्छ? मलाई थाहा छ कि मेरो निर्णयले केही मानिसहरुलाई रिस उठाउनेछ जसले मेरो आँखामा केवल आँसु देख्न मन पराउँछन्, “उनले लेखिन्।
आज म जीवनको अर्को चरणमा विभिन्न उतार चढावहरू, सुख र दुःखहरू अँगालेको छु; र हाँसो र जीवनको आँसु, “उनले थपिन्” मैले आफ्नो जीवनको दुखद अध्यायलाई बन्द गर्ने र खुशीको सुरू गर्ने निर्णय गरेको छु। मेरो दिमागको पछाडि विगतका मीठो पलहरूसँग भविष्यको सजावटको नयाँ यात्रामा जाने निर्णय मेरो लागि एक्लो र सम्भव थिएन। ”
नायिकाले आफ्नो बिहे पछि को अन्तर्वार्ता मा सम्पूर्ण परिवार का सात मेडिया अगाडी आएकी छिन् अन्तर्वार्ता मा वहाले आफुले नसोचेको भन्दा धेरै माया पाएको बताएकी छिन् वहाको सासुआमाले आफुहरुले स्वेता लाइ बुहारी हैन छोरि को रुप मा स्वीकारेको बताएकी छिन्।
Tags: latest nepal news second marriage sweta khadka
Next धादिङमा ३७ बर्षिय एक महिलाले जन्माईन तीन छोरी !